Eygan ayaa Pow | Site Slot Top | CoinFalls Online Casino
Hillaac Box Games, site a Afyare sare oo bilaabay a video booska cusub Eygan Pow. Afyare Tani waa shan duntu iyo shan iyo labaatan khadadka mushaharka hal. Waxay ku salaysan tahay theme of cartoon Chinese 'Kung fu-bear'.The Afyare bixisaa feature gaar ah bonus in deeq 20 dhigeeysa free bilowgii laakiin joogitaanka feature dib-u-kicin taas oo siin karaa ilaa 40 dhigeeysa free ka dhigaysa in ay xitaa ka badan oo qaali ah. Sidoo kale waa in Mid ka mid ah u raadiyaan pandas dahab heer sare on duntu oo is Mire Waqaf oo in la sameeyo guul weyn. Haddii aad jeceshay hubinta baxay naadi cusub ka site top Afyare ka dibna booska tani waa xaqiiqada ah qiimihiisu beesadda kasta oo aad soo duuduubo.
geesi The, Kung fu-jecel, orso cartoonish qaadataa stage xarunta Pow Eygan ayaa ku bixiyaan goobta top Afyare 'hillaac Box Games'. In kulankaan, ciyaaryahan leh xaddiga ugu yar oo ah £ 0.25 per wareejin iyo inta ugu badan oo ah £ 1000,00 per wareejin ciyaari kara. Sidoo kale, mid ka mid ah la qabsato kartaa kala duwan oo qadaadiic ka duwan oo yar oo ah £ 0.30 qadaadiic ah halkii line in ay £ 100 qadaadiicda per line. Waa in boqolkiiba ciyaaryahan ee ugu laabto 95-97%.
Waa Maxay Sidaas gaar ah?
Waxaan had iyo jeer cajiib ah in la ogaado oo ku saabsan naqshado muuqaal ah duntu horumariyo by site top Afyare i.e Games Box hillaac. Ay booska cusub video Eygan Pow waa Intaa waxaa dheer ugu danbeeyay ee liiskan wuxuuna helay aqoonsi weyn ka mid ah ciyaartoyda casino. duntu waxaa si aad u wanaagsan dhigay guud ahaan hortegi lahaa moolka cas lagu qurxiyey xardho style Chinese.
Ciyaartoyda waa inay eegto iyo siraaddo ah, taageerayaasha iyo lacagta qadaadiicda oo dahab ah, sida mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay bixisaa lamoodaa up of boqol qadaadiicda for payline kasta. Dhamaan calaamadaha, kuwaas oo haddii ay kalluun dehabi ku biiray kordhin kartaa guuleystayna si laba boqol coins.The calaamad ugu qurxiyey ka mid ah calaamadaha caadiga ah waa PANDA ilmo- nasanayso on laan geed. Calaamaddan waxaad ka heli kartaa 2, 5, 50, 125 ama 500 lacagta birta ah haddii ciyaaryahan waa dhul ka mid awood, laba, saddex, afar ama shan on mid ka mid ah 25 bixin khadadka ee ciyaarta.
Pandas iyo Free dhigeeysa
Mid ka mid ah astaanta il-qabad leh kulankaan waa PANDA labaad- xidhashada calalkiina cas. Waxay u dhaqmo sida duurjoogta ah iyo sidoo kale calaamad u kala firdhiso oo taa ku badali karaa oo dhan calaamado kale. Oo weliba, waxa kale oo ku caawin kara si aad u bilowdo feature ee bonus free. Waxaa dhulkii karaa oo keliya on 3 duntu dhexe iyo sameysmi karaa isku-dar ah ku guuleystay guul weyn. Caga shan ama in ka badan this dhaqaajiso karaa feature ee bonus xor ah oo taas oo ciyaartoyda la siiyo sida soo socota-
5 dhigeeysa lacag la'aan ah 5 fidiyana PANDA.
8 dhigeeysa lacag la'aan ah 6 fidiyana PANDA.
12 dhigeeysa lacag la'aan ah 7 fidiyana PANDA.
15 dhigeeysa lacag la'aan ah 8 fidiyana PANDA.
20 dhigeeysa lacag la'aan ah 9 fidiyana PANDA.
Sidoo kale, mid si sahal ah ku arki kartaa astaanta Mire Waqaf oo cusub – Eygan ayaa Golden waxaa ku daray in ay duntu ee dhigeeysa free. Calaamaddan muuqata in si buuxda Mire Waqaf oo markii ciyaaryahan ku dhufan on duntu ku 2, 3, 4 iyo 5. Oo weliba, si ay u sameeyaan isku-dar ah ku guuleystay, calaamad this bedeli karaa oo dhan calaamad kale marka laga reebo kala firdhiso. Caga badan oo iyaga ka mid ah oo ku saabsan isku wareejin, mid ka kasban kartaa Ajir wayn.
Eygan ayaa Pow by site top Afyare i.e Games hillaac Box ayaa had iyo jeer soo dhammaysteen laga filayo ee booska ku caashaqay. Iyada oo feature gaar ah u bonus, kulankaan ayaa noqday arrin la qabatimo. Waxay leedahay cadow dhexdhexaad ah iyo mid ka filan karto si ay u helaan ugu badnaan ilaa 500 × of saamigiisa. Hillaac Box ayaa si cad u xaqiijiyay sida site a booska ugu sareeya by bilaabay kulankaan oo xiiso leh! waxay inoo naftaada Hubi!